၂၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါတီတိုင်းမင်းသွားမယ် - သတင်း
၂၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါတီများမှာလူတိုင်းတွင်တစ်ယောက်စီရှိသည်။ သင်အသက် ၂၁ နှစ်ရောက်သောအခါသင့်တွင်သူငယ်ချင်းများအလုံအလောက်ရှိပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျေးလက်သုတ်တံများ၊ proscco ပုလင်းများနှင့်ချောကလက်ကိတ်မုန့်များမကုန်ဆုံးနိုင်သောသယ်ဆောင်ခါးပတ်သို့ပြောင်းရန်သင့်တွင်ရှိသည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးအသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီးသောအချိန်တွင်၊ သင်သည်မွေးနေ့ပါတီပွဲကြီးကိုနောက်တဖန်မသွားလိုတော့ပါ။ သော်လည်းကြောင်းမပြုမီ, ဒီမှာသင်မျှော်လင့်ထားနိုင်ရာ၏တစ် ဦး အမြန်တစေ့တစောင်းပါပဲ။
Surrey အတွက် marquee
ဖိတ်စာများကိုအလွန်တင်းကျပ်သော RSVP နှင့်စားဆင်ယင်ကုဒ်နှင့်ခြောက်လကြို။ ပေးပို့ခဲ့သည်။ မွေးနေ့မင်းသမီးသည်သူမ၏အိမ်၊ ဥယျာဉ်၊ မြေ၊ ကား၊ မိသားစုနှင့်သူမမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်ပြသရန်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သငျသညျအဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ပြောထားပေမယ့်သင်မွေးနေ့ -zilla upstaging အပေါ်စီစဉ်နေလျှင်, ထပ်မံစဉ်းစားပါ။ မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ခုနစ်လုံး၊ မိန့်ခွန်းများ၊ ပစ္စုပ္ပန်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ ဆိုက်ရောက်ရှမ်ပိန်နှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်တရားဝင်စကားပြောဆိုမှုများရှိလိမ့်မည်။ သငျသညျအခမဲ့စီးဆင်းမှု Champers အပေါ်ငွေသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြို့ထဲသို့တက္ကစီရမတိုင်မီသင်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အစာအိမ်လိမ့်မယ်။ နောက်မှတွေ့မယ်။
uni ထဲကညအများစုလိုပဲဒါပေမယ့်စောစောစီးစီးထွက်သွားရပြီးတစ်ညလုံးအတင်းအကျပ်ပျော်စရာတွေနဲ့ပတ်သတ်နေမှာပါ။ လူတိုင်းသည်ညအချိန်တွင်ထွက်ခွာရန်ငွေမည်မျှရှိသည်ဟုမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်အမှန်တကယ်သမ္မာသတိရှိကြသည်။
အဆိုပါ uni အိမ်သူအိမ်သားပါတီ
ခင်ဗျားကသူမသူမကို ၂၁ ယောက်မြောက်ပါတီလို့ပြောတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကပုံမှန်ထက်ပိုကြီးတဲ့ပါတီတစ်ခုလုပ်ဖို့ပဲလိုချင်ကြတယ်။ ထိုတွင်ရှိလူအများစုကသူမမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုပင်သိရှိနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊
သေချာတာပေါ့၊ Moet ကကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် Wetherspoons မှာ Blue Lagoon တစ်လီတာကိုပေါင် ၈.၉၉ နဲ့ရနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီညဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမှမနက်ဖြန်အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကယ်တင်ချင်ကြလို့ဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ဆိုးမသွားစေချင်ကြဘူး။ ရှစ်နာရီအကြာတွင်£ 60 ချ, သင် KOKO မှာဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်သင်လသာဆောင်မှဤစက်ရုံအိုးပစ်ချဘာကြောင့်သင်သတိရကြဘူး။ လူတိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပေမယ့်သင်ဟာဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမျက်လုံးနီရဲခြင်းဖြင့်သင်ပြောနိုင်တဲ့အရာတွေဆီကပါ။
အဆိုပါထိုင် -down ညစာ
သင်ဤကြီးပြင်းလာခြင်းကိုတကယ်လိုချင်သည်။ သင်စတင်ခဲ့သည်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစာ 21 ဖြစ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိုပွဲပင်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် kebab ဖက်ခြင်းလမ်း၏ဘေးထွက်မှာထွက်သွားတော့နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်မမွေးနေ့ညထွက်မရှိတော့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြtheနာကသင်၏မိတ်ဆွေများကလူကြီးဖြစ်ရန်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအရသာခံလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ဝိုင် ၃ ပုလင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးနှင့်အတူညစာစားရန်လာကြသည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်တန်းအတိတ်မရခဲ့ဘူး, တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြက်သား casserole တက်ပစ်ချ, သင်မလွှဲမရှောင်, တစ် ဦး kebab ဖက်နှင့်လမ်းဘက်မှာလွန်သွားတက်အဆုံးသတ်။
Callum အခမဲ့စပျစ်ရည်ကိုဆေးကြောပြီးနောက် paella အပေါ်တက်ပစ်သည်အထိဒါဟာတော်တော်လေးယဉ်ကျေးပါပဲ။
21 ရက်နေ့တွင် 21
၂၁ နာရီအတွင်းတစ်ရက်လျှင် ၂၁ ခွက်သောက်ခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ကမလွှဲမရှောင်သာတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါနှင်း emoji ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
အဆိုပါ spa တနင်္ဂနွေ
Jacuzzi မှာထိုင်ပြီးမိနစ် ၂၀ နှိပ်နယ်ပေးခြင်းအတွက်သင့်ကိုပေါင် ၁၅၀ ကျသင့်ပါတယ်။ ငါဒီမှာထိုင်နေစဉ်ငါ့အရေကိုတက်ရှုံ့နှင့်အသည်းအသန် Speedos ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက် creepy အဆီလူ၏အကြည့်ကိုရှောင်ရှားနေချိန်မှာငါပျော်စရာရှိသည်ဖို့ဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဤမျှကာလပတ်လုံးရှိပါတယ်။ ငါ£ 30 ဇိမ်ခံစွဲချက်ပေးဆောင်ဖို့ငြင်းဆန်သောကြောင့်ငါသွေးထွက်သံယိုတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဂါဝန်မရကြဘူး။
ထုံးစံအတိုင်းအတိအကျအတူတူ၊ လူတိုင်း မှလွဲ၍ လူတိုင်းနည်းနည်းမူးနေပြီးအမှန်တကယ်ကောင်းသောအချိန်ရရန် ပို၍ ဖိအားလည်းရှိသည်။ သူတို့ကဖြစ်ကောင်းစောလွန်းထွက်ခွာသို့မဟုတ်အခြားကောင်လေးနှင့်အတူအချိန်အများကြီးဖြုန်းတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ပတ်သက်။ အငြင်းအခုံအချို့ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်နှင့်တတန်းအတွက်ဒုတိယနှစ်တွင်တက်မပြခဲ့ဘူးသူကိုအကြောင်းကို bitching ၏ပဒေသာရှိလိမ့်မယ်။
တကယ်ကို fuck ဆိုတဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ်တစ်ခု
မင်းရဲ့ ၂၁ ယောက်အတွက်အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာပန်းချီကားများ၊ proscco များ၊ ရထားများပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခါသမယဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်သင်ဒီမှာရှိနေသည်မှာအေးခဲနေသောအေးခဲနေသောမီးဖိုချောင်၌ထိုင်နေပြီးစားပွဲပေါ်ရှိညစ်ပတ်သည့်ဟင်းလျာများ။ ), မကြာမီမီး၌ကစားရလိမ့်မယ်, Blossom Hill ကစပျစ်ရည်ကိုဖြိုဖျက်, £5များအတွက် VKs သုံးခုဝယ်ယူ, freshers နှင့်တိုက်ပွဲများစတင်နှင့်နစ်ကီ Minaj သင်၏အရာရှိတီးဝိုင်းစဉ်အခါသင်ပျော်စရာပျော်မွေ့ဟန်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်သိ, နောက်ထပ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆပျော့ပျောင်းသော SU ညဥ့်အဘို့အပြင်ဆင်နေ လူကြီးသို့ induction ။ ဒါဟာအားလုံးဆိုးဆိုးရွားရွားဝမ်းနည်းပေမယ့်, သင်၏မွေးနေ့စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းလက်၌မတိုင်မီနှစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့အခါ, သင်ဘာမျှော်လင့်ခဲ့တာလဲ
မင်း၊ ဆမ်၊ ဝီ၊ တီ၊ မာ့ခ်၊ Mike နဲ့ဒီအရက်ကိုအခမဲ့သောက်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာစားပွဲတစ်လုံးဝိုင်းရံထားသည်။ သင်ဟာပုလင်းထဲကသောက်ဖို့ဟန်ဆောင်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Gray Goose ရဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုလင်းကြီးကို ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ သင်ဟာညဘက်အများစုကိုဆေးလိပ်သောက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါလိမ့်မယ်။
သင်နာရီဝက်အကြာတွင်သင် ၀ င် ရောက်၍ အာမခံပေးသည်
သင်ကလုပ်ဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာင်သိပေမယ့်သူ Lucy ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားပါတီကဲ့သို့တညဉ့်အဘို့မိမိပါတီဖွဲ့စည်းသည့်အခါဟင်နရီဒီဖြစ်ပျက်မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကဟင်နရီဆီကိုသွားဖို့ပါ။ (အိမ်မှာအချိုရည်အနည်းငယ်သောက်ပြီးနောက်မှာ) သူမထနိုင်အောင်မတိုက်ခိုက်ခင်သူနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်အတော်ကြာကြာဆုံခဲ့တယ်၊ ရုတ်တရက်သူဖန်တီးထားတဲ့မထိုက်မတန်မိန်းကလေးတွေမရှိဘူးဆိုတာနှစ်ခါစစ်ဆေးပါ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ထို့နောက်သန်းခေါင်အချိန်၌ Lucy ကိုမှာဖြစ်ဖို့ဝေးခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။
သငျသညျအပေါ်သာအတွက် drop ဖို့စီစဉ်ပေမယ့်အဲဒီမှာအဲဒီမှာလူအလုံအလောက်မရှိဘူးကြောင့်ကြိုးစားနှင့်စွန့်ခွာရန်လည်းအဆင်မပြေပါတယ်
fuck ဆိုတဲ့အဘို့အလိုငှါဟင်နရီ, အဘယ်ကြောင့်သင်ပိုမိုမိတ်ဆွေများကိုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ဘူး?
yeah ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချ, သင်ရယ်, တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမသိရပါဘူး။ မင်းကလေးနှစ်အရွယ်ကတည်းကစမ်နဲ့အတူကျောင်းသွားတက်ခဲ့ရတယ်၊ မင်းရှစ်နှစ်တုန်းက Wales ကိုအတူတူပင်အားလပ်ရက်သွားခဲ့တယ်။ ယခုမှာသူတစ် ဦး fuck ဆိုတဲ့ - ပယ်ကြီးမားပါတီပစ်ရဲ့သင်လက်တွေ့ကျကျသင်အိမ်ပြန်မသာလူများထဲမှတ ဦး တည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ်ရိုးသားပါတယ်။
သငျသညျမိတျဆှတေစျ ဦး ၏မိတျဆှတေစျ ဦး ၏မိတျဆှေဖွစျ။ သငျနှငျ့သူ၏မွေးနေ့ကသူတို့အနေဖြင့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောခွဲခြားမှုဒီဂရီများစွာရှိသည်။ သို့သော်သင်ထင်သောကြောင့် fuck ဆိုတဲ့, အခမဲ့ proscco တစ်ဖန်ဖန်ခွက်နှင့် (ငွေလင်ပန်းကိုချွတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်) yorkshire pudding မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီခြင်း, က fuck ဆိုတဲ့ငါ Gloucestershire ယခုငါဒီမှာငါအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်။ ငါ့သီအိုရီ: သောက်စရာဝန်။ ၀ န်ထုပ်ဝန်၊ ၀ န်ထုပ်ဝန်၊ ၀ န်ထုပ်၊ အဆုံးတွင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်Field Marshall Helmuth ကားလ် Bernhard von Moltke Count တစ်ချိန်ကတင်လိုက်: အဘယ်သူမျှမစစ်တိုက်အစီအစဉ်ရန်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ရှင်သန်။ သင်၏ Twitter ဆက်သွယ်မှုကိုလန်းဆန်းစေသည့် Doritos အနားတွင်ရပ်နေခြင်းသို့မဟုတ်လူတို့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အဲဒါဘယ်သူလဲ၊ သူတို့ဘာကြောင့်ဒီမှာနေကြတာလဲ။ Gabi ကိုသူတို့သိသလား။
သင် Vibe လုံးဝမှားယွင်းနေရှိရာစုရုံး
သင်သည်ပထမနှစ်မှသူငယ်ချင်းအတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပွဲသို့ဖိတ်ကြားခံရပြီးသင်သွားရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်ဟုခံစားရသည်။ ဒါဟာသင်အမြဲနှင့်အတူရတယ်သူတစ် ဦး ၏မျိုးပါပဲ။ ဆsix္ဌမပုံစံကနေကလေးဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ပထမဆုံးနှစ်မိတ်ဆက်အပိုင်းမှာပါတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကတော်တော်ထူးဆန်းပေမယ့်ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းထင်ခဲ့ဖူးတယ် - ထူးဆန်းတာကသူတို့ရဲ့ဗေဒပဲ။ သူတို့ကစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတောင်တက်ပြီးအင်္ကျီလက်တွေမတူတဲ့အင်္ကျီတွေ ၀ တ်ဆင်ပြီး Inbetweeners က Simon ကိုသူတို့ပုံဖော်နေတုန်းပဲ။
သင်သူငယ်ချင်းများကိုခေါ်လာပြီးသင်ညအိပ်အနားမ ၀ င်ခင်ကြိုတင်သောက်စရာအဖြစ်အသုံးပြုရန်မျှော်လင့်သည်။ ဒါပေမယ့် Vibe ကိုသင်လုံးဝမှားယွင်းစွာစီရင်မိသည်။ သငျသညျ cider နှစ်ခုလီတာပုလင်း, Sourz နှင့် Off- အမှတ်တံဆိပ် Jaegermeister, Echo ရေတံခွန်နှင့်မြှင့်တင်ရေး၏ tinnies ပုလင်းနှင့်အတူတက်လှည့်။ ဒီကောင်လေးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာတချို့လိုချင်လိမ့်မယ်လို့မင်းထင်တယ်
ကောင်းကောင်းသူလုပ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မိသားစုကအဘွားကိုလာစုဆောင်းတာနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရက်သောက်ခြင်းစည်းမျဉ်းတွေကိုသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အားလုံးထိုင်ခုံပေါ်မှာ pissing လုပ်နေတယ်၊ ​​Dirty Mike ကစောလွန်းနေပြီ။ သူ့အမေကမင်းကိုကြည့်နေတယ်။ မင်းသူ့ ၂၁ ယောက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးသင်အရှက်ရသင့်တယ်။
သို့သော်အကူအညီပေးရန်အတွက်ဓာတ်ပုံများစွာရှိပါသည်။ တဖန်သင်တို့ကြည့်ရှုပါ အရမ်းကောင်းပါတယ် တရဲ့၌သင်တို့၌ tagged ပါတယ်။
သူတို့စီမံကိန်းတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေသင်လုံးဝနောက်ကွယ်မှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်၊ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကွယ်မှာရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, prosecco နှင့်အတူထိုင်ထိုင်မုန့်ညက်, သူတို့၏ဘုရားသခင်ကြောက်မက်ဘွယ်အိမ်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူထွက်နှင့်သင်မွေးနေ့မိန်းကလေးအဘို့ထို 21 ရိုက်ချက်များပစ်စဉ်သင်တို့၏ဆံပင်ပြန်ကိုင်အပါအဝင်တတန်းအတွက်သုံးညထွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကမှာအားလုံးကုန်ကျဘယ်လောက်အရေးမထားဘူး။ သင်တစ်ချိန်က ၂၁ နှစ်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလွန်အဖိုးတန်သောငွေပမာဏတစ်ခုစီကိုသင်၏မိသားစုနှင့်တွေ့ရန်နေရာတစ်နေရာသို့ပေါင် ၅၀ ရထားပေါ်တွင်သုံးရန်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်သည်ထက်ပိုသည်။
သူမသည်သင်စွန့်ပစ် သင်ဆဲသွားခဲ့တယ်။ Doritos ဖလားအားလုံးနှင့်အတူစားပွဲအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ မင်းတညလုံးအိပ်နေတုန်းမင်းဖုန်းကိုကြည့်နေတယ်။
သင့်ရဲ့နည်းနည်းအစ်မ / အစ်ကိုရဲ့ 21
သူတို့ကိုလုံးဝလှည့်စားခွင့်ပြုခြင်း၊ ကလပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသိမ်းဆည်းထားခဲ့သည့်အရှက်တကွဲဖြစ်ရပ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်။ ရပါတယ်။
မင်း sorority လား? မင်းအသက် ၁၂ နှစ်လား။ ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပါ၊ ဒါပေမယ့်နေ့ရောက်လာပြီ၊ မိုးရွာနေပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့ထိုင်ပြီးထိုင်ပြီးသေးငယ်သော l ည့်ခန်းနားမှာထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ရင်းထိုင်ခုံလေးမှာထိုင်နေရင်းလူတိုင်းကရာသီဥတုမကောင်းဘူးဆိုတာကိုညည်းတွားနေစဉ်ငါဟာတစ်ခုခုနဲ့တူနေတယ်။ သွားချင်တယ်
အလယ်ခေတ် Knights ပါတီအတွက်စျေးပေါတဲ့ဝတ်စုံကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
သင်၏မွေးနေ့သည်ကိတ်နှင့်အလွန်နီးကပ်သောကြောင့်ဤအရာသည်သာဖြစ်ပျက်နေသည်။ သငျသညျဤမတိုင်မီမွေးနေ့ 20 ရှိခဲ့ဖူးတယ်နှင့်သင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောဝေမျှရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှ။ ယခုမူကားယခုတတိယနှစ်တွင်အဲလစ်ကသူငယ်ချင်းအသစ်တစ်ခုဖွဲ့လိုက်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်အားလုံးသောအထင်ကြီးလေးစားမှုကိုရရှိပြီးပန်းရောင်ကော့တေးများသည်ပျော်စရာဟုထင်ရသည်။ သင်ကိတ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောသောအခါသူမအနေနှင့်သူမပါတီကိုကြိုက်နှစ်သက်နေသည်ဟုပြောသောအခါ၎င်းကိုဆုံးရှုံးရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သူမသည်လာမည့်နှစ်တွင်န်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လူတိုင်းကမေရီမပြခဲ့သူတွေအကြောင်း ranting သူမ၏ညဥ့်နေချိန်မှာသူတို့ကဒီမှာဖြစ်ဖို့သုံးနာရီမောင်းကြောင့်မကျေနပ်မှု။ Lucy သည်သင်၏မွေးနေ့ထက်မနက်ဖြန်မနက်တွင်သူမစာမေးပွဲကိုဂရုစိုက်သကဲ့သို့
မင်းရဲ့ ၂၁ ယောက်
သငျသညျလိုလျှင်, mာ၏အဆုံးမဲ့လက်လှမ်းမမီနှင့်စကေးစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အအေးနှင့်ခြောက်သွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်သို့မဟုတ်သင်ဂရုစိုက်သည့်အရာအတွက်အနည်းငယ်သာဂရုစိုက်ပါသည်။ သင်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အိပ်မက်များကိုမမြင်နိုင်ပါ၊ သငျသညျတနေ့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုသောဤဖုန်မှုန့်, ​​တစ်ချိန်ကတစ် ဦး တည်းသာ, သင်သည် 21 နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါတီမှ fuck ဆိုတဲ့ပစ်တဲ့နေရာတစ်နေရာလည်းမရှိ။ ဘယ်တော့မှတစ်ခါတစ်ခါဘယ်တော့မှမ အခုဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသာမကသင်မည်သည့်အရာနှင့်မကိုက်ညီသောပါတီတစ်ခုကျင်းပနိုင်မည်နည်း လိုအပ်တယ် ဖြစ်ပွားစေရန်?
ဖြစ်ကောင်း tbh ။